यस्ताे अनाैठाे घ-टना काठमाडौकाे कोटेश्वरमा जसले प्रहरी लाई समेत चकित पार्याे !
बिहिबार, साउन २१, २०७८ ७:४०
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। काठमाडौकाे कोटेश्वरमा घटेकाे यस्ताे अनाैठाे घ-टना जसले प्रहरी लाई समेत चकित पार्याे ! काठमाडौंको कोटेश्वरमा अनौठो घ-टना भएको छ । श्रीमानले सहकारीमा तिर्नुपर्ने ऋणको पैसा तिरेकै दिन उनकै श्रीमतीले सहकारीको दराज फो-डे-र पैसा चो-रे-की छन् ।
श्रीमती सहकारीको लेखापाल हुन् । कोटेश्वर स्थित सौभाग्यशाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा यस्तो घट-ना भएको हो । लेखापाल रहेकी सावित्री सुवेदीले श्रीमान कपिल खड्काको सहयोगमा सहकारी लु’&ट- पा’&- ट गरेकी हुन् । उनीहरु दुवै जनालई प्रहरीले प-क्रा-उ गरेको छ । उनले श्रीमानसँग मिलेर सहकारीको १७ लाख ८५ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ लु*’टे*को प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले घट-ना-को अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् । गत माघ २५ गते साँझ ५ बजेपछि र २६ गते बिहान ७ बजेभित्र रकम चो-*री-एको हुनसक्ने कर्मचारीको भनाई छ तर कर्मचारीले भने २६ गते बिहान कार्यालय पुगेपछि मात्रै थाहा पाएका थिए।
कार्यालय खुल्लै रहेको र भित्र रहेको दराजको साँचो पनि खोलिएको देखेपछि घ-ट-नावारे प्रहरीलाई जानकारी गराइएको थियो । रकम राख्ने कोठा र दराजको चाबी सहकारीका अध्यक्षसँग मात्रै थियो तर पनि सहकारी तो*’ड* फो* ’ड नगरी चाबी खोलेरै चो-*रि- एको पाइएपछि प्रहरीले सुरुदेखि नै त्यहीँका कर्मचारीमाथि बढी आशंका गरेको थियो ।
२५ गते बैंक बन्द भइसकेपछि एक ऋणीले १० लाख रुपैयाँ बुझाएको रेकर्डमा देखिएको थियो । उनी सावित्रीकै श्रीमान् भएको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएपछि प्रहरीले शंका उनीमाथि गरेको हो । बाँकी रकम बजारबाट संकलन गरेर जम्मा भएको थियो । सावित्रीका दम्पतीले भक्तपुरको ठिमीमा घर बनाउँदा सहकारीबाट ऋण लिएका थिए ।
सोही ऋण उनका श्रीमानले तिरेका हुन् । श्रीमानले ऋणको पैसा तिर्नु अघि नै सावित्रिले नक्क-ली साँचो बनाएको पनि खुलेको छ । सहकारीका अध्यक्षलाई गत कात्तिकमा को-रोना भएको थियो। त्यही बेला सावित्रीले नक्कली चाबी तयार गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा पाइएको छ । सुरुमा अस्वीकार गरे पनि अहिले उनीहरुले गल्ती स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।